Inkuthazo yesiBini yokuKhangela ukuza? I-Trump COVID-19 yenza amathuba eSkyrocket - Ezintsha
Eyona Ezintsha Ngaba isiQinisekiso sesiBini siKhangela ukuFika? I-COVID-19 yeTrump yenza amathuba eSkyrocket
Ngaba isiQinisekiso sesiBini siKhangela ukuFika? I-COVID-19 yeTrump yenza amathuba eSkyrocket
I-PHILADELPHIA-MEYI 8: Ukutshekishwa kwezoqoqosho kulungiselelwe ukuprintwa kwiziko lezeMali laseFiladelphia ngoMeyi 8, 2008 ePhiladelphia, ePennsylvania. Imizi ezizigidi ezilikhulu elinamashumi amathathu anelungelo lokufumana isaphulelo kwirhafu phantsi kwesicwangciso sezigidi ezili-168 zezigidi zoqoqosho.UJeff Fusco / Getty Izithombe
Qaphela: Eli bali lihlaziyiwe.
Emva kweenyanga zokuvalwa phakathi kwamaDemokhrasi kunye namaRiphabhlikhi ngaphezulu komjikelo wesibini we-coronavirus yokunceda kwezoqoqosho, intetho zebill yokuvuselela yaqala kwakhona eCapitol Hill kule veki nabameli beDemokhrasi becebisa iphakheji eyi- $ 1.2 trillion encinci kunoMthetho weHEROES abawusungula ngoMeyi.
USomlomo weNdlu uNancy Pelosi uthe umthetho ohlaziyiweyo weDemokhrasi uza kubandakanya i-2.2 yezigidigidi zeedola kuncedo lwezoqoqosho, kubandakanya neendlela ezininzi ezithandwayo ezazikuMthetho weCARES ngoMatshi. Ezi zibandakanya i-1,200 yeedola yokujonga abantu abadala kwiintsapho ezinengeniso ephantsi kunye neerandi ezingama-600 ngeveki izibonelelo zokungasebenzi.
Amagqabantshintshi oMthetho weHEROES ohlaziyiweyo:
I $ 1,200 yabarhafi ngamnye enengeniso yonyaka phantsi kwe- $ 75,000; $ 2,400 kwizibini ezitshatileyo ezinengeniso engaphantsi kwe- $ 150,000; kunye ne- $ 500 yomntu ngamnye oxhomekeke kuye nokuba ungakanani na.
$ 600 kwizibonelelo ezongezelelweyo ezingenamsebenzi ngeveki, ukubuyela umva ngoSeptemba 6 kunye nokuhlala ngoJanuwari 31, 2021.
Iibhiliyoni ezingama-436 zeedola kurhulumente wasekhaya nakwasekhaya.
$ 225 yezigidigidi kumaziko emfundo.
Iidola ezili-120 zeerandi zokutyela, i-10 yezigidigidi zeedola kwiindawo zokuzonwabisa kunye neebhiliyoni ezingama-28 zeedola kwishishini leenqwelo moya.
$ 249 yezigidigidi kwiSebe lezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu ukuxhasa iinkqubo ezahlukeneyo zononophelo lwempilo, kubandakanya ukuveliswa kunye nokuhanjiswa kwezitofu.
Iibhiliyoni ezili-15 zeedola zoncedo lokutya ngeNkqubo yokuNcedisa iSondlo.
Uncedo lweedola ezili-15 leedola kwiNkonzo Yeposi yaseU.S.
NgoLwesithathu, uNobhala Wezemali uSteven Mnuchin uphakamisile Inguqulelo ye-White House yesicwangciso sokuvuselela kunye nee-tweaks ezinkulu eziphambili zephakeji entsha yeDemokhrasi. Isicwangciso sikaMnuchin singabandakanya i-1.62 yezigidigidi zeedola kwisibonelelo esipheleleyo, esiphantse saya kuthi xhaxhe kwiidemokhrasi kodwa sikhulu kunesineti yeRiphabhlikhi yasehlotyeni.
Asiyi kwenza isivumelwano se-trillion ezi-2.2 zeerandi, utshilo uMnuchin ngeShishini leFox ngoLwesithathu. Umongameli usiyalele ukuba size phezulu kakhulu, ke ngoko sivela kwisivumelwano se-trillion esasisebenza kuso ngaphambili.
Basesekude kakhulu, banikwe inyani yokuba iidemokhrasi sele bezinciphisile ezabo iipakethe ngesinye kwisithathu kwaye basene-gulf yeedola ezingama-600. I-Senate Republican kudala ingafuni ukuchitha ngaphezulu-nditsho nokufumana i-1 yezigidigidi zeedola bacebise ukuba ehlotyeni kugcwele ukungqubana kwe-GOP. Ekuqaleni kuka-Septemba, iNkokeli yeNdlu yeeNgwevu ye-Senate uMitch McConnell yazisa isicwangciso esibhityileyo enikezela ngeedola ezingama-300 ngeveki kwizibonelelo zokungaqeshwa kodwa yayiphantsi nangaphantsi kwe- $ 1 trillion ecetywayo ehlotyeni.
Yayifile-ekufikeni, ayikwazi ukwaphula i-filibuster yeDemokhrasi.
Umthetho oyilwayo wokulalanisa wawuza kufuna ukuba uMcConnell awuvumele ukuba uziswe emgangathweni emva koko malunga neshumi elinambini labaphathiswa beRiphabhlikhi abagqibe ekubeni baphule imigca yamaqela bayivotele. Kukho inani labasenethi abasengozini yokungenela unyulo olunokuthi lukhethe ukwenza njalo, nangona befuna iRiphabhlikhi eyongezelelweyo ukuba bazimanye nabo.
Kuya kwenzeka, ndiyacinga, ngexesha elixineneyo, I-Senator Republican yase-Indiana uMike Braun utshilo ngexesha lokubonakala kweTV ngoLwesine . Kwii-Senate Republican ezininzi, iya kuba lelona nani liphezulu, ngaphandle komxholo. Oko kwabonakaliswa kokwethu, kodwa oko akuthethi ukuba ungangafumani li-10 ukuya kweli-15, mhlawumbi amaRiphabhlikhi angama-20 kwiNdlu yeeNgwevu anokuhamba nezinto eziza kulungelwa zii-Senate Democrats.
I-Senate Republican ijolise kakhulu ekuqinisekiseni iJaji u-Amy Coney Barrett kwiNkundla ePhakamileyo, eya kuthi ikhawulezise ezi ngxoxo okanye ibashiye sele befile. Ubuncinci kude kube semva kosuku lonyulo.
Izinto zithathe ukujika okungalindelekanga ngentsasa yangoLwesihlanu emva kokuba uMongameli uDonald Trump eqinisekisile ukuba yena nenenekazi lokuqala uMelania bavavanyelwe i-COVID-19. U-Pelosi uthe ukuxilongwa kuka-Mongameli kungatshintsha indlela yeengxoxo ezikhuthazayo kwiidemokhrasi.
Olu hlobo lotshintsho olushukumisayo, kuba apha babona ubunyani bento ebesiyithetha kudala: Le yintsholongwane enobungozi, utshilo uPelosi kwiMSNBC ngolwesiHlanu. Siza kufumana umhlaba wethu oqhelekileyo.
Kutheni wonke usomashishini efuna iBiggie's 10 Crack Commandments
Kwiminyaka eli-10 ubudala, Abasebenzi kuphela kweNew Yorkiest yeeCocktail neeBhari
Umthetho oYilwayo wokuThuthwa okuFihliweyo ufumana inkxaso kumalungu ama-3 eNdlu
ngobabalo lukathixo bhanyabhanya
ngu blake shelton kunye no gwen stefani nangoku kunye
jonga iirekhodi zolwaphulo-mthetho zabantu mahala
ngaba izingwe zenza izilwanyana zasekhaya ezilungileyo
ngeyure le-11 kim basinger
kukuba i-70s ibonisa ukushiya i-netflix
lingakanani ixesha lokupheka elifanelekileyo